David Luiz oo ka Wanaagsan KUBBAD-SAMEEYAASHA Premier League…Arag Xaqiiqadaan ?? – Gool FM
( Premier League ) 12 Jan 2019. Daafaca Chelesa David Luiz ayaa si la yaab leh ku noqday mid kamida cayaariayanada ugu kubbad abuurista badan Premier League, sida lagu wariyay xaqiiqadaan.
Ninka heerka caalami ee dalka Brazil ayaa isku dayay baasas badan oo kubbadaha loo yaqaan “through balls” marka loo eego xiddigaha kale ee cayaaraya horyaalka sare ee England inta lagu guda jiro xagaagan 2018-19.
Through balls: Waa kubbadaha loo tuuro weeraryahannada iyadoo la gadaal marinayo daafacyada kooxda kaa soo horjeeda.
Luiz ayaa isku dayay baasas dhex ka tuura oo gaaraya 25-jeer, waa ku dhawaad laba jibaar baasas ka badan inta uu sameeyay laacibka kusoo xiga.
Kubbadaha ugu Badan ee Dhex ka tuura Premier League Xagaaga 2018-19
Xiddiga Blues ay kawada tirsan yihiin ee Jorginho, kaa oo ay kooxda mar kaliya wada yimaadeen Maurizio Sarri oo ay hore ugu wada shaqeeyeen Napoli, ayaa ah cayaariyahanka kusoo xiga wuxuuna sameeyay 13 dhex ka tuur – isagoo lamida laacibka West Ham United Felipe Anderson.
Gylfi Sigurdsson oo Everton ayaa sameeyay 12 baas, halka kubbad-sameeyasha Tottenham Hotspur Christian Eriksen, xiddiga Leicester James Maddison iyo dhaliyaha Liverpool Mohamed Salah ay dhammaantood sameeyeen 11-baas oo baas dheere ama dhex bixis ah.